चर्चित अभिनेता शाहरुख खानका छोरा पक्राउ, के हो अभियोग ? — Imandarmedia.com
चर्चित अभिनेता शाहरुख खानका छोरा पक्राउ, के हो अभियोग ?
काठमाडौ। लागूऔषध मुद्दामा पक्राउ परेका बलिउड नायक शाहरुख खानका छोरा आर्यनसहित तीन जनाको रात हिरासतमा बितेको छ।मुम्बईको अदालतले आर्यनसहित अरबाज मर्चेन्ट र मुनमुन धमेचाको जमानत अस्वीकार गरेपछि उनीहरू हिरासतमै बस्नु परेकाे हाे। अदालतले अर्यालसहित तीनै जनालाई एक दिन हिरासतमा राख्न नारकोर्टिक कन्ट्रोल ब्यूरो एनसीबीलाई अनुमति दिएको थियो।
मुम्बईस्थित कार्डेलिया द इम्प्रेस क्रूजमा आयोजित ड्रग्स पार्टीमा छापा मारेर एनसीबीले आर्यनसहित आठ जनालाई आइतबार हिरासतमा लिएको थियो। आठमध्ये तीन जनालाई एनसीबीले सोधपुछ अदालतमा पेस गरेको थियो। अदालतको अनुमतिपछि तीनै जनालाई एनसीबीले आफ्नो हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। आर्यनका तर्फबाट चर्चित क्रिमिनल लयर सतीश मानेशिंदेले जमानत माग गरेका थिए।
नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्युरोले शनिबार बेलुका मुम्बइमा एक लग्जरी क्रुज जहाजमा छापा मारेको थियो। यो क्रुज शिपमा ड्रग्स पार्टी चलिरहेको थियो। यहाँबाट एनसीबीले ८ जनालाई हिरासतमा लिएको थियो । यी ८ जनामध्ये शाहरुख खानका छोरा आर्यन पनि भएको पुष्टि भएको छ । यी आठैजनासँग सोधपुछ भइरहेको छ।
एनसीबीले आठै जनाको नामको खुलासा गरेको छ। एनसीबी सूत्रले नवभारत टाइम्स अनलाइनलाई बताएअनुसार नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्युरोले शाहरुख खानका छोरा आर्यन खानविरुद्ध केस दर्ता गरेको छ। यद्यपि एनसीबीले आधिकारिक रुपमा यसको पुष्टि गर्न बाँकी छ। हिरासतमा लिएर सोधपुछ भइरहेका व्यक्तिहरुको नाम सार्वजनिक गरिएको छ।
एनसीबीका जोनल डाइरेक्टर समीर वानखेडेले समाचार एजेन्सी एएनआइलाई बताएअनुसार ब्युरोको हिरासतमा आर्यन खान, अरबाज मर्चेन्छ, मुनमुन धमेचा, नुपुर सारिका, इश्मीत सिंह, मोहक जयसवाल, विक्रान्त छोकर र गोमित चोपडा छन् र उनीहरुसँग सोधपुछ भइरहेको छ। हिरासतमा लिइएका मध्ये अरबाज मर्चेन्ट अभिनेता हुन्। उनलाई आर्यनको साथी बताइएको छ।
अरबाजले नै आर्यनलाई त्यो पार्टीमा लिएर गएको बताइएको छ। मोहक, नुपुर र गोमित दिल्लीका हुन्। मोहक र नुपुर फेशन डिजाइनर हुन्। नुपुर गोमितको साथमा मुम्बइ आएकी थिइन्। गोमित हेयर स्टाइलिस्ट हुन्। आर्यनको केस चर्चित वकिल सतीश मानेशिन्देले लड्ने भएका छन्। सतीश मानेशिन्दे एनसीबीको अफिस पुगिसकेका छन्। सुशान्त सिंह राजपुतको मृत्युपछिको ड्रग्स केसमा सतीशले नै रिया चक्रवर्ती र उनका भाइ शोभिकको केस लडेका थिए।
मुम्बइ नजिक समुद्रमा नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्युरो एनसीबीले अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो छापामार कारवाही गर्दै एक ठूला अभिनेताका छोरा समेत १३ जनालाई हिरासतमा लिएको छ। कार्डेलिया द इम्प्रेस नामको क्रुज शिपबाट समातिएका यीमध्ये ८ जनालाई औपचारिक रुपमा गिरफ्तार गरिएको छ। यो मामिलामा बलिउड अभिनेता शाहरुख खानका छोरा आर्यनसँग पनि सोधपुछ भइरहेको छ।
एनसीबी सूत्रलाई उद्धृत गर्दै भारतीय अखबार दैनिक भास्करले जनाएअनुसार क्रुजमा शाहरुखका छोरासँगै बलिउडमा प्रतिष्ठित अर्का ठूला अभिनेताकी छोरी पनि थिइन्। कुन अभिनेताकी छोरी को हुन् भन्ने विषयमा खुलाइएको छैन। उनलाई हिरासतमा लिइएको छ वा छैन भन्ने विषयमा पनि एनसीबीले कुनै जानकारी दिएको छैन। क्रुजको एक फोटो पनि सार्वजनिक भएको छ। फोटोमा आर्यन खान र उनका साथी अरबाज मर्चेन्टको साथमा एक युवती पनि छिन्।
यी युवतीको केसमा संलग्नता थियो वा थिएन, उनी पार्टीमा सहभागी थिइन् वा थिइनन् भन्ने विषयमा प्रस्ट हुन नसकेकोले उनको पहिचान लुकाइएको छ। सूत्रका अनुसार क्रुजमा भइरहेको पार्टीमा गएकाहरुले आफ्नो पाइन्टको सिलाइमा, महिलाहरुले पर्सको ह्याण्डलमा, भित्री वस्त्रको सिलाइ गरिएको भागमा र कलरको सिलाइमा ड्रग्स लुकाएर लिएर गएका थिए।